19 / 09 / 2019 28 / 01 / 2020 ရော့ Paton 2230 Views စာ0မှတ်ချက် 75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်မီးသတ်၏ Goblet, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ
75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု ပေါင် ၃၀ နဲ့ရနိုင်တဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲကောင်းတဲ့တည်ဆောက်ပုံနဲ့အသေးစားပုံစံတွေပါ ၀ င်ပါတယ်
စျေးနှုန်း: £ 29.99 / $ 29.99 / € 34.99 အပိုင်းပိုင်း: 265 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကို 75945 Expecto နာယက အတွက်တန်ဖိုးများ၏အယူအဆစဉ်းစား Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 2019 ၏အစုံနှင့်လုံးဝလိုလိုလားလားထားကြောင်းရာထူးမပေးခဲ့ပါဘူး 75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု ပေါင် (၁၀) ပိုကုန်ကျသည်။ အတူတူအသေးစားနံပါတ်များနှင့်အရေအတွက်နှစ်ဆကျော်ပိုများသည်။
အများကြီးတွေအများကြီးနဲ့တူ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ လက်ရှိထွက်သတ်မှတ် 75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု သီးသန့်အသေးအဖွဲများပါ ၀ င်သည်။ လေးလုံးစလုံးသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းပုံစံလေးမျိုးဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်artထံမှ Triwizard ပြိုင်ပွဲအတွက် icipants ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Goblet of Fire သည်သူတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးတာ ၀ န်တွင်ပေးထားသောနဂါးများကိုသိမ်းယူရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
အသေးအဖွဲများ - ဟယ်ရီပေါ်တာ, Cedric Diggory, Viktor Krum နှင့် Fleur Delacour တို့ကို - မျှော်လင့်ထားသည့်ဂရုစိုက်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ Lego 2019 တွင်အုပ်စုဖွဲ့ထားခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်စရာသည်စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်အတွက်မည်မျှမှန်ကန်သည်၊ တံမြက်စည်းတလုံးနှင့်နဂါးတစ်မျိုးတည်းသာ (Harry's Horntail) ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း - ချန်ပီယံတစ် ဦး တည်းသာအခြားသူများစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တစ်ပြိုင်တည်းသွားနိုင်သည် တဲထဲမှာပါ။ မင်းမှာတဲအဖြစ် p ရှိတယ်art အခြားတစ်ခုသည်တံမြက်စည်းပေါ်တွင်ပျော်စရာမရှိတော့သည့်အချိန်တွင်သင်၏မလိုအပ်သောအသေးသုံးပုံသုံးပုံသည်ယင်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောစတစ်ကာများလည်းပါရှိပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတဲအတွင်း၌ပြုလုပ်နိုင်သည် Lego Group မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။
သဘာဝအရဟယ်ရီ၏နဂါးမှာအခင်းထဲပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှု၊ ဟန်ဆောင်မှုနှင့်ဇာတ်ကောင်များကိုအနည်းငယ်သောအပိုင်းများ၌မည်သို့သိမ်းဆည်းထားသည်၊ ၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ မစိုက်ပျိုးသေးသောသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရွယ်၏ထက်ဝက်ခန့်မြင်းခွာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အုပ်စုသည်တည်ဆောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးပေါင် ၁၀၀ ထက်နည်းသောအစုအဖွဲ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး နှစ်ဘက်စလုံးအတွက်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ပေါင် ၃၀ ဈေးနှုန်းကိုသိရန်ဟယ်ရီသည်ရွှေကြက်ဥကိုသိမ်းရန်သူ၏လမ်းပေါ်သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားရန်အတွက်တိုတောင်းလှသည့်နဂါးငယ်လေးတစ်ခုရှိသည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့, Task ကိုယခုခက်ခဲမထင်ရ။
၎င်းသည်အနည်းငယ်ရှက်စရာကောင်းသော်လည်း၊ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအသုံးပြုထားသောအပိုင်းအစများအနေဖြင့်ဤတည်ဆောက်မှုတွင်ဘာမျှအလဟ and မဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊ အဓိကအားဖြင့်ဘောလုံးအဆစ်အများအပြား၏ကျေးဇူးကြောင့်မော်ဒယ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထားသော၊ ပုံသွင်းထားသော ဦး ခေါင်းနှင့်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်နဂါးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးစုဆောင်းမှုတွင်ကောင်းမွန်သောထပ်ပေါင်းထည့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု မှအမှတ်ရစရာအခိုက်၏ကောင်းတဲ့ပြန်ဆိုသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်မီးခွက်, partဒါကြောင့်မင်းကိုတောင်းခဲ့တဲ့ငွေအတွက်။ ဈေးကြီးတဲ့နဂါးကြီးဘယ်လိုပုံပေါက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမိမှာပဲ၊ မင်းလက်ထဲမှာကိုင်ထားမယ့်မင်းကိုမင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ သေးငယ်သောအပိုင်းအစများအတွက်လိမ္မာပါးနပ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူအသေးစားပုံစံရွေးချယ်မှုကောင်းမွန်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ လိုင်း။
75946 ဟနျဂရေီ Horntail Triwizard စိန်ခေါ်မှု ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com. သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← ပင်လယ်ဓားပြများ - LEGO ဘဏ္treာနှစ် ၃၀
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: Spacegirls ၏ည →